American University of Sharjah - Fianarana ambony any ivelany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra
fanafohezan-teny : FROM
Aza adino ny discuss American University of Sharjah
Na dia eo aza ny maha tanora amin'ny taona, American University of Sharjah (FROM) no hankalazana manerana ny faritra noho ny fianarana sy ny kolontsaina maro toeram-pianarana tsara indrindra ny fiainana.
naorina in 1997 noho ny fahamboniako Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mpikambana ao amin'ny Filankevitra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy Mpitondra ny Sharjah, ny oniversite dia envisaged noho ny fahamboniako ho toy ny mpitarika rafitra fanabeazana ao amin'ny Helodrano faritra. Fahatsiarovan-tena mifototra amin'ny Amerikana sekoly fanaovana fianarana ambony, Aus dia tsara mifototra amin'ny kolontsaina sy ny Arabo dia anisan'ny dingana lehibe kokoa ny revitalization ny ara-tsaina ny fiainana ao amin'ny Afovoany Atsinanana. Isika mahaleo tena, tsy-fa-tombony coeducational fikambanana izay mirehareha ny amin'ny anjara asany amin'ny maha-mpitarika feno coeducational oniversite, manompo ireo mpianatra avy any amin'ny faritra sy manerana izao tontolo izao.
Amin'ny maha-Mpanome ny kalitaon'ny fampianarana ambony ao amin'ny Gulf, Aus ny fahazoan-dalana sy ny fandaharana dia deraina ny Commission for Academic fankatoavana ny Ministeran'ny Fanabeazana ny Fampianarana Ambony Raharaha fisarahana eo amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. AUS is also accredited in the United States of America by the Middle States Commission on Higher Education (3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, Tel +1 215 662 5606). Ny mari-pahaizana licence ny siansa diplaoma injeniera fandaharanasa in simika, injeniera sivily, solosaina injeniera, injeniera herinaratra sy ny milina injeniera natolotry ny College ny injeniera dia deraina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny Engineering Vaomieran'ny ABET (www.abet.org). Ny mari-pahaizana licence ny siansa diplaoma fandaharana ao amin'ny ordinatera ny siansa natolotry ny College ny injeniera dia deraina ny computing fankatoavana Vaomieran'ny ABET (www.abet.org). The Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) ary ny Master of Business Administration (MBA) mari natolotry ny Sekoly Business Administration no deraina noho ny Association ho Advance Collegiate sekoly ny Business (AACSB), www.aacsb.edu. Ny Bachelor maritrano fandaharana ny College maritrano, Art and Design no deraina noho ny National Architectural Accrediting Board (NAAB) ny United States, www.naab.org.
Aus dia mpikambana ao amin'ny AAICU (Association ny American Colleges Iraisam-pirenena sy oniversite), ny mpitarika ny fikambanana iraisam-pirenena Amerikana oniversite, izay mpikambana ao manome tompon'andraikitra lahateny sy ny kalitao fanomezan-toky ny Amerikana fampianarana ambony ivelan'i Etazonia.
American University of Sharjah manolotra anareo ny fahafahana hiaina marina Amerikana fanabeazana ao amin'ny Gulf.
Ity fanambarana efatra dia manana dikany:
voalohany, ny faneva ny fampianarana dia mitovy ny an'ny tena oniversite any Amerika.
faharoa, ny fomba fampianarana ny efitrano fianarana dia Amerikana ao amin'ny fanantitranterany ny tsirairay fandraisana an-tanana, mavitrika amin'ny fianarana sy ny fampiharana ny fahalalana.
fahatelo, mpianatra ny fiainana ao amin'ny toeram-pianarana dia manan-karena amin'ny kibay, fanatanjahan-tena sy hetsika ara-kolotsaina.
fahefatra, ny fandaharam-pianarana dia voalamina araka ny fomba Amerikana semesters sy ny antokony.
Ankoatry ny, mirehareha isika mba ho taratry ny toe-tsaina miandalana ny Emirates, niaiky mamirapiratra tanora lahy sy vavy toy ny mpianatra fotsiny ny fototry ny fianarana fepetra na inona na inona ny foko, loko, lahy sy ny vavy, fivavahana, fahasembanana, taona na ny fireneny. Stratejika napetraka eo ny Extrême-Orient sy ny Andrefana, anelanelan'i Afrika sy Asia, ny toerana dia iray amin'ireo fananan'ny lehibe indrindra.
Avy andro fahiny ho amin'ny andro maoderina, Sharjah Mirehareha tsara laza mendrika manerana ny faritra ho toy ny zava-dehibe foiben'ny varotra sy ny varotra ary koa ny zavakanto sy ny kolontsaina.
Vola àry ny fotoana, ny saina sy ny fanahy ao aus sy hijinja ny soa ny asa mafy sy ny fanoloran-tena ao amin'ny taona maro ho avy. Izahay any ho anareo ny dingana amin'ny lalana!
Zavatra Teny sy ny Haisoratra
AUS was founded in 1997 noho ny fahamboniako Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. As AUS President, Sheikh Sultan has stated his vision for a distinctive institution rooted in the region’s Arab-Islamic heritage, in the context of the aspirations and needs of contemporary society in the UAE and the Persian Gulf region.
Ianao ve mila discuss American University of Sharjah ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: American University of Sharjah ofisialy Facebook